यसकारण कम उमेरका युवती बढी उमेरका पुरुषतर्फ आकर्षित हुन्छन् - Babal Khabar
केहि अघि बलिउड अभिनेत्री पि्रयंका चोपडा र अमेरिकी गायक, अभिनेता निक जोनासबीच इंगेजमेन्ट भयो । यो आफैमा एउटा खबर हो । र, रमाइलो कुरा त आफ्नो हुनेवाला श्रीमान् निक भन्दा प्रियंका करिब ११ बर्ष जेठी छिन् । यो अपवाद हो । यो अपवाद नेपालमा प्रियंका कार्कीको दम्पतिमा पनि देखिएको हो । अक्सर श्रीमतिभन्दा श्रीमान्को उमेर बढी हुने गर्छ । बलिउडमै हेर्ने हो भने, अधिकांश अभिनेत्रीका श्रीमान् उनीहरु भन्दा निकै पाको छन् । कतिपय त दोब्बर उमेरका पनि । भनिन्छ, युवतीहरु विन्दास एवं कम उमेरका केटासँग डेट गर्छन् । तर, विवाहका लागि भने आफुभन्दा बढी उमेरकै पुरुष खोज्छन् । यसमा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ । युवतीहरु अपरिपक्क युवासँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैनन् । बरु आफुभन्दा निकै पाको उमेरकासँग उनीहरु राजी हुन्छन् । किन होला त ?
किन होला ? : उस्तै उमेरका युवायुवतीले एक अर्कालाई मनपराउनु वा एक अर्काबीचमा आकर्षण हुनुलाई स्वभाविकै मानिन्छ । तर कहिले काँही उमेरमा ठूलो अन्तर भएका महिला पुरुषबीचमा पनि प्रेमसम्बध देख्न सकिन्छ । अझै विशेषगरी कार्यक्षेत्र वा कार्यालयमा युवतीहरु आफूभन्दा धेरै उमेरका पुरुषहरुतर्फ आकषिर्त भएको देख्न सकिन्छ । त्यसैले आजभोली यसलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिँदैन । यसलाई सामान्य कुरा मान्न थालिएको छ । हाम्रै वरिपरि यस्ता धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ जसमा जागिरे महिलाहरु आफ्नो कार्यालयका सिनियर वा हाकिमको प्रेमजालमा फसेका छन् ।
यस्ता सम्बन्धमा रहेका सबै युवतीहरुले उमेरदार पुरुषसँग टिकाउ र स्थायी सम्बन्ध बनाउन चाहेका छन् भन्ने छैन् । कैयौं युवतीहरुले यसै चक्करमा आफ्नो जीवन बर्बाद पनि गर्छन् । यस्तो सम्बन्ध काँचको महलको रुपमा छिटै ढल्छ । कुरा जब विवाहको हुन्छ तब यस्तो सम्बन्धको आधार कमजोर हुन्छ । तर, मानिसको मन पनि अचम्मको हुन्छ । कसैको मनमा कोही बस्यो भने त्यहाँ उमेरको सीमा र जन्मको बन्धनले केही अर्थ राख्दैन । धेरै उमेरको अन्तर भएको प्रेमसम्बन्ध त्यति टिकाउ नहुने भएकाले धेरैले यसलाई एकअर्काको कमजोरीलाई उपयोग गरेर आफ्नो फाइदा लिने हतियारको रुपमा पनि लिन्छन् । किन युवतीहरु आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषको प्रेममा पर्छन् ? यस्ता छन् कारणहरुः
१. सुरक्षाको भाव : कैयौ पटक कम उमेरका युवतीहरु आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । यस्तो अक्सर त्यतिखेर हुन्छ जब कुनै युवती बचपन देखि नै एक्ली हुन्छन् । परिवारमा पिता वा भाई जस्ता पुरुषको संरक्षण नमिलेको कारण उनीहरुलाई अपमान वा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको हुन्छ । यस्ता युवतीहरु सजिलै आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । कैयौंपटक युवतीहरुको यो संकेतको र बाध्यताको फाइदा पुरुषले उठाएको पनि देखिन्छ ।
२. परिस्थितीको कारण : कार्यक्षेत्रको परिस्थितीले पनि कैयौं पटक यस्तो सम्बन्ध बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् । कैयौं कार्यालयमा फिल्डवर्क हुन्छ । कामको क्रममा युवतीहरु कहिलेकाँही सिनियरहरुसँग कार्यालय बाहिर जानुपर्छ । अनुभव नभएका युवतीहरुलाई यसको फाइदा पुग्छ । विस्तारै विस्तारै युवतीहरु पुरुष सहकर्मीहरुका नजिक आउँछन् । कामको सिलसिलामा लगातार सँगै रहँदा कैयौं पटक मन पनि मिल्छ ।
३. स्वार्थ : पुरुषहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि पनि कैयौंपटक कम उमेरका युवतीहरुलाई आफ्नो मोहजालमा फसाउँछन् । युवतीहरुले सहकर्मी भएको नाताले मात्रै पनि पुरुषहरुसँग वार्तालाप गर्छन् भने काममा केही मद्धत माग्छन् । यस्तैमास्वार्थी प्रवृत्तिका पुरुषले यसको गलत फाइदा उठाउने कोसिस गर्छन् र युवतीहरु उनीहरुको जालमा फस्न आइपुग्छन् ।
४. बाध्यता : कैयौं पटक बाध्यताको कारण सँगै काम धेरै उमेरका सहकर्मीको नजिक आउनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर मुख्य कारण बाध्यता हुन्छ सम्बन्धित पुरुषको उमेर होइन । आजभोली धेरै कार्यस्थलमा कामको चाप बढेको छ र समय कम हुन्छ । कम समयमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नको लागि युवतीहरुले आफ्ना सहकर्मी पुरुषहरुको सहयोग लिन हिच्किचाउँदैनन । यो आवश्यक पनि हुन्छ तर मनलाई के गर्ने ? सहयोग लिँदालिँदा मन पनि एकअर्काको नजिक आउँछन् त्यतिखेर उमेरको बन्धनले कुनै अर्थ राख्दैन ।
५. प्रलोभन : प्रलोभन वा लालचको कारणले पनि युवतीहरु उमेर भएका पुरुषहरुको चंगुलमा फस्छन् । कैयौं युवतीहरु धेरै सौखिन र फेसनेबल हुन्छन् । उनीहरुको आवश्यकता धेरै हुन्छ तर आवश्यकता पुरा गर्ने साधन सिमित हुन्छ । यस्तो स्थितीमा यदि कुनै धेरै उमेरको व्यक्ति जो साधनसम्पन्न छन् र पैसाको कमी छैन भने यस्ता युवतीहरु र उनीहरु तर्फ आकषिर्त हुन्छन् । यस समयमा उनीहरुले पछिसम्मको परिणाम देख्दैनन् । तत्कालिक लाभ नै उनीहरुको लागि सर्वोपरि हुन्छ । कैयौं युवतीहरु करियरको मामिलामा सर्टकट अपनाउन चाहन्छन् र धेरै ठूलो छलांग लगाएर पदोन्नती प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यही लोभमा उनीहरु हाकिमसँग हिमचिम बढाउँछन् र हाकिमका धेरै उमेरलाई ख्याल नै गर्दैनन् ।
कहिलेकाँही कुनै धेरै उमेरको व्यक्तिले आफ्नो प्रभाव, व्यक्तित्व वा रहनसहनले पनि युवतीहरुलाई प्रभावित बनाउने गर्छ । राजनीति र आर्थिक जगतमा जोडिएका हस्तीहरुको साथमा कम उमेरका युवतीहरु उनीहरुको मोहपासमा बाँधिएका देखिन्छन् । यस्ता सम्बन्धले सँधै बर्बाद नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । कैयौपटक यस्तो सम्बन्ध सफल भएको पनि देखिएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा आपसी सम्बन्ध र परिपक्वताको हो । जहाँ सुझबुझ, विवेक र धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो भएमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन् ।
आकर्षण र प्रेममा फरक छ : आकर्षण त मात्रै आकर्षण हुन्छ र धेरै आकर्षण क्षणिक पनि हुन्छन् । टाढाबाट त हरेक चीज आकर्षक देखिन्छन् । त्यसको वास्तविकता त नजिक आएपछि नै थाहा हुन्छ । केयौं पटक यहि आकर्षणले आकाशबाट सिधै धरातलमा ल्याउँछ । आकर्षण प्रेम, चाहना र जीवनभरको साथ सबै फरकफरक कुरा हुन् । आकर्षण र प्रेमलाई एकै सम्झिनु नै गलत हो । कुनै राम्रो वस्तुलाई देखेर आकषिर्त हुनु एक सामान्य कुरा हो तर यो आकर्षणलाई जीवनभरको बोझ बनाउन आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हुन सक्छ । किनभने हरेक चम्किलो चीज सुन हुँदैन । फेरि पनि बदलिँदो समयको आवश्यकता वा बिना मेहनत सफलता हासिल गर्ने होड मा कम उमेरका युवतीहरु धेरै उमेरका पुरुषतर्फ आकर्षित हुनुलाई खासै राम्रो सुरुवात मानिँदैन । यो अज्ञानतामा उनीहरुको भविष्य दाउमै लाग्न पनि सक्छ ।
Prevओठमा चुम्बन गर्न र रोमान्टिक समय साट्नका लागि सबै भन्दा उत्तम कहिलेत हेर्नुहोस्
nextछोरी जन्माउँछु भन्दै नाम राखेर कपडा समेत किने, छोरा पाएपछि प्रियंका’आयुष्मान अक्क न बक्क